आईसीपी शीघ्र संचालन गर्न माग
वीरगञ्ज । भारतीय सांसद डा. संजय जयसवालले आईपीसी शीघ्र संचालन गर्न माग गरेका छन् । मंगालवार कस्टम उपयुुक्त संग भेटेरनै उनले सो माग गरेका हुन् ।उनी कस्टमका उपायुुक्त संतोषकुमार संग भेटेरनै आईसीपी पूर्ण रुपले काम नगरेको कारण जानकारी समेत लिएका छन् । आईसीपी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रुपमा दिल्लीवाट गरेका थिए । भारतवाट आउने र नेपालवाट जाने गाडीहरु आईसीपी भएर आवतजावत गर्ने हिसावले सञ्चालनमा ल्याईएको थियो तर, केहि गाडीलाई आईसीपी भएर प्रवेश गराई मात्र औपचारिकता पूरा गरिएको भन्दै सांसद डा. जयसवालले सो विषयमा जानकारी लिएका छन् ।